अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि देउवा ? यस्तो छ अङ्कगणित
महिलालाई उद्घोषण तथा वक्तृत्व विकास तालिम
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशन चैत ७ गते, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने
यसकारण अक्षयको ‘सूर्यवंशी’ रिलिजको आधिकारिक घोषणा भएन
विश्व श्रवण दिवसमा काठमाडौंमा गरियो कार्यक्रम (तस्बिरसहित)
१३ वर्षपछि नेपाल पर्यटन बोर्डमा उपाध्यक्ष चयन
तापसी, अनुराग र मधुको घरमा आयकरको छापा
चिडियाखानामा विद्युतीय गाडी सञ्चालनको तयारी, ज्येष्ठ नागरिकलाई सयर गराइने
विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बढ्यो, मोबाइल बैंकिङबाट दैनिक २ लाख ट्रान्सफर गर्न सकिने
११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि एक अर्ब ८ करोड निकासा
अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि देउवा ? यस्तो छ अङ्कगणित अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता अबको प्रस्थानविन्दु
बाह्रखरी - मंगलबार, फागुन ११, २०७७
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएसँगै नयाँ सरकारको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहज निकास दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर पनि बहस भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु नैतिक प्रश्न त खडा भएको छ । आफ्नो कदम अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि ओलीले तत्काल राजीनामा बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।
तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मुडमा देखिन्छन् । ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङले फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर मात्रै यसबारे बताउने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले निकास दिए पनि नदिए पनि नेकपाको विभाजित समूह प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले पनि सरकार गठनका लागि राजनीतिक कोर्स अघि बढाइसकेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक नेताले अब बन्ने सरकार सर्वपक्षीय हुने जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर अबको सरकार गठन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसका लागि उनीहरूले अहिले संसद सचिवालयमा पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने पनि तयारी गरेका छन् ।
“त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । हामीले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि सारेका छौँ । त्यसमा नेकपाका सांसदको मात्रै हस्ताक्षर छ । नेकपाको सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैनन् । कांग्रेसको साथ लिनै पर्छ,” एक नेताले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेससमेतलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
नेकपा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग ९२ सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा उनीहरूसँग ९२ जनाको हस्ताक्षर थियो । त्यसमा केही मन्त्रीको हस्ताक्षर बाँकी थियो । त्यसमध्ये केही ओलीतिर लागेका छन् । केही फर्किएका पनि छन् । संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओलीतिरबाट १५ जनाभन्दा बढी सांसद फर्कने उनीहरूको विश्वास छ । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा रहेका १७४ मध्ये १०० भन्दा बढी सांसद प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसँग हुनेछन् । सरकार बनाउन ३८ मत आवश्यक हुन्छ । ओली पक्षबाट अरू दुई–चार जना सांसद तानेर र साना दललाई विश्वासमा लिएर सरकार गठन गर्ने बाटो त छ । तर, ओलीतिरबाट अहिले नै सांसदहरू फर्किइहाल्ने विश्वासमा प्रचण्ड–नेपाल छैनन् । तसर्थ पहिलो विकल्प कांग्रेससमेतलाई विश्वासमा लिएर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र कांग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल चलाउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको योजना छ ।
कदाचित् कांग्रेस तयार नभएर उसैलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी समझदारी खोज्ने विकल्प पनि रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको भनाइ छ ।
त्यसो त ओली पक्षले पनि आफ्नो तयारी थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाललाई गर्नै नदिने योजनामा ओली छन् । राष्ट्रिय युवा संगठनले मंगलबार आयोजना गरेको शपथ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको बताउनुले पनि कांग्रेससँगकै सहकार्यको संकेत गरेको बुझ्न कठिन हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि अहिले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
पार्टी विभाजनपछि पनि ओली नेतृत्वको पार्टी दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावना रहेकाले सरकार बनाउन उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । ८० सांसद नघट्ने दाबी गर्दै देउवा र ओली मिलेर सरकार गठन गर्न मत पुग्ने उनीहरूको विश्वास पनि देखिन्छ ।
मंगलबार, फागुन ११, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिडियाखानामा ज्येष्ठ नागरिक र महिलाका लागि विद्युतीय गाडीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले... १ घण्टा पहिले
काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन... २ घण्टा पहिले
गोपाल बम भन्छन्- ओली समूहमा लागेको भन्दै अनर्गल प्रचार गरियो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका मुगुका सांसद गोपाल बमले आफू नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहमै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले बुधबार एक विज्ञप्ति... ३ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री पुगे चिडियाखाना (तस्बिरसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदर चिडियाखाना जावलाखेल पुगेका छन् । ओलीले बुधबार श्रीमती राधिका शाक्यसहित चिडियाखाना भ्रमण गरेका... ३ घण्टा पहिले
सरकार–विप्लवबीच भयो दोस्रो चरणको वार्ता, भट्टराई भन्छन्– छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ
काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहसँग आजै दोस्रो चरणको वार्ता गरेको छ । दोस्रो चरणको वार्ता विषयकेन्द्रित रहेको... ४ घण्टा पहिले
नेकपाको बैठक नै बसेको छैन, कसले गरेछ कारबाही ? : नेम्वाङ
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले आफूलाई कारबाही गर्ने कुरा हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया... ४ घण्टा पहिले
निको भएका: ९,०७,५८,९००